Khasaaro ka dhashay dagaal ka dhacay Magaalada Cadaado - Awdinle Online
Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan kuwa Nabadsugida Soomaaliya ee ku sugan Magaalada Cadaado iyo maleeshiyo Beeleed hubeysan ayaa waxaa uu ka dhacay irida Xarunta Madaxtooyada ee Magaalada Cadaado.
Dagaalka ayaa yimid, sida la sheegay, kaddib markii maleeshiyo Beeleed hubeysan ay weerar ku qaadeen Ciidamada Nabadsugida oo ku sugan Irida Madaxtooyada, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalka ay ku dhaawacmee labs Ruux oo isugu jira Shacab iyo dhinacyadii dagaalamay, waxaana goobjoogayaal ay sheegayaan in maleeshiyaadka hubeysan ay ku sugan yihiin duleedka Magaalada Cadaado.
Goobjoogayaasha ayaa waxaa sidoo kale ay sheegeen in muddo ku dhow 30 daqiiqo uu hakad galay isku socodka dadka iyo Ganacsiga walow markii dambe ay dib u dilaawdeen.
Xaalada Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay haatan tahay mid degan, iyada oo Maamulka degmada iyo laamaha Amniga weli ka hadlin dagaalkii dhacay.
Previous articleDEG DEG:- Dagaal ka socda Magaalada Cadaado
Next articleXisbiga Wadajir oo soo bandhigay Hantida uga maqan weerarkii Xarunta Hoggaamiyahooda